Fifidianana: hisy ny torolalana amin’ny fanaovana fitoriana | NewsMada
Fifidianana: hisy ny torolalana amin’ny fanaovana fitoriana
“Famoahana torolalana an-tsoratra hoenti-manampy izay rehetra mandray anjara amin’ny fifidianana eny anivon’ny kaominina ho avy izao.Mba haneho ny zony na ny mpirotsa-kofidina izany, na ny mpifidy, na izay rehetra manana tombony amin’ny fanaovana fitoriana.”
Io ny fanazavan’ny eo anivon’ny filankevi-panjakana momba ny atrikasa, teny Antaninarenina, omaly, ny amin’ny atrikasa iarahan’ny minisiteran’ny Fitsarana sy ny Friedrich Ebert Stiftung (FES) Madagascar, amin’ny hisian’ny voka-pifidianana eken’ny rehetra ka hanaovana torolalana amin’ny fitoriana eny anivon’ny Filankevi-panjakana sy ny fitsarana misahana ny ady amin’ny fanjakana.
Amin’izany, afa-mitory eo anivon’ny fitsarana mahefa ny tsirairay avy, hahatonga ny voka-pifidianana hivoaka eo ho ara-dalàna sy eken’ny rehetra. Mitsara, araka izay taratasy tonga eo aminy, ny fitsarana. Ho afa-maneho ny heviny hitory eny amin’ny fitsarana ny vahoaka malagasy amin’izany, indrindra ny mpifidy.
Mitsara araka ny taratasy voarainy ny mpitsara
Mba hahatonga ny fitsarana hitsara tokoa araka ny taratasy voarainy izay fanomezana torolanana ho amin’ny fitoriana mitombina izay, ary hamoaka didim-pitsarana mety sy mifanaraka amin’ny zava-misy. Mba hahatonga ny fifidianana handeha koa izay, madio sy mangarahara ary eken’ny rehetra.
Ny olana, tsy fantatry ny olona loatra hatramin’izay ny lalàna sy ny paika, indrindra ireo zony amin’ny fifidianana. Izay no mahatonga ny fitoriana lavin’ny fitsarana mahefa satria tsy mahafeno ny fepetra takin’ny lalàna.
Dingana manaraka aorian’ny atrikasa ny fanaparitahana ny torolalana, izay misy hampisain’ny mpitsara, ao ny hampiasain’ny mpifidy… Hifarana anio ny atrikasa.